Xoghayaha QM Antonio Guterres Oo Dacwad ka Gudbiyay Dalal ay kujirto Somaliya – Heemaal News Network
Xoghayaha QM Antonio Guterres Oo Dacwad ka Gudbiyay Dalal ay kujirto Somaliya
Sida ay qortay Wakaaladda Wararka ee AP Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa madaxweynaha golaha loo dhan-yahay ee QM wuxuu uu u diray qoraal liddi ku ah wadamo ay ku jirto Soomaaliya.
Qoraalka Antonio Guterres oo la sii marsiiyay Volkan Bozkir ayaa lagu sheegay in Soomaaliya, Comoros, iyo Sao Tome ay wayn doonan xuquuqdooda cod-bixinta sababo ku aadan in aysan dhameystirneyn qoondadooda miisaaniyada UN-ka.
Hayeeshee Antonio Guterres uu sheegay in goluhu uu soo saaray qaraar sheegaya inay wali ka codayn karaan kalfadhiga Hadda socda oo ku eg bisha Sebtember ee sanadkan 2021.
Dalalka Iran iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa kamid ah dalalka lagu leeyahay qoondad miisaaniyadda hawlgalka ee Qaramada
Midoobay, waxaana la sheegay inay dhankooda lumin doonaan xuquuqdooda codbixinta ee Golaha Guud ee 193-ka xubnood.
Axdiga Qarammada Midoobay ayaa dhigaya in xubnaha deyntoodu ay le’eg tahay ama ka badato xaddiga tabarucaadkooda labadii sano ee ka horreysay ay lumiyeen xuquuqdooda codbixinta, sida lagu sheegay qoraalka uu gudbiyay Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres.
Sida lagu sheegay warqadda uu gudbiyay xoghayaha guud ee QM lacagaha ugu yar ee loo baahan yahay si loo soo celiyo xuquuqda codbixinta ayaa gaareysa $ 16,251,298 oo Iran laga doonayo iyo $ 29,395 oo ah Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe.
Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay bixiso lacag dhan $1443,640 si aysan u waayin xuquuqdeeda codbixinta wixii ka dambeeya bisha soo aadan ee September, halka Comoros laga rabo bixiso $ 871,632, Sao Tome and Principe $829,888, sidaagu sheegay Qoraalka Xoghayaha Guud ee QM
Somaliland:-Degmooyin Qaar Oo Lagu Dhawaaqay Natiijada Hordhaca ah Ee Doorashada.
Sababta Dowladda Qatar U Xirtay Nin Kenyan ah Oo la Shaaciyay
Caruur Lagu Toogtay Maraykanka Iyo Calanka Oo Hoos Loo Dhigay
Heemaal May 25, 2022
Milatriga Burkina Faso Oo Shaaciyay Inay Afgembi kula Wareegeen Dalkaasi(Sawiro)
Heemaall January 25, 2022 January 25, 2022